Madaxweyne Farmaajo oo Lagu Soo dhaweeyay Caasimada Garoowe [SAWIRRO] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Madaxweyne Farmaajo oo Lagu Soo dhaweeyay Caasimada Garoowe [SAWIRRO]
Madaxweyne Farmaajo oo Lagu Soo dhaweeyay Caasimada Garoowe [SAWIRRO]
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa galabta soo gaaray caasimadda Puntland ee Garoowe, halkaasi oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay.
Masuuliyiinta ku soo dhaweysay madaxweynaha garoonka waxaa ka mid ahaa ra’isul wasaaraha xukuumada federaalka Xasan Cali Khayre, madaxweynaha Puntland Siciid cabdullaahi iyo Ku-xigeenkiisa Axmed Karaasha, Wasiiro iyo xildhibaano.
Madaxweynaha waxaa safarka ku weheliyay Wasiirka Beeraha iyo waraabka federaalka Siciid Xuseen ciid, guddoomiyaha gobolka banaadir C/raxmaan Yariisow iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan labada golle ee dowladda.
Bidix, Guddoomiyaha gooblka Banaadir C/raxmaan Yariisow, Xildhibaan Nuur Bayle iyo Wasiirka Beeraha iyo waraabka Siciid Xuseen Ciid
Madaxweynaha ayaa ka qaybgalaya shirka wadatashiga federaalka iyo maamul goboleedyada oo maalinta beri ah ka furmaya magaaladda Garoowe.
Dhinaca kale, waxaan isla maanta Garoowe soo gaaray madaxweynaha Galmudug Xaaf iyo wafti uu hoggaaminayo, waxaa hore u sii joogay madaxweynayaasha Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur galbeed.